ESI GBANYỤỌ ỤGBỌALA DVD DỊ NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Kedu ka m nwere ike isi gbanyụọ ụgbọala DVD-aka na Windows 10
Autorun na Windows bụ akụkụ nwere njirimara nke na-enye gị ohere ịmepụta ụfọdụ usoro ma chekwaa oge ọrụ mgbe ị na-arụ ọrụ na mwepụ mpụga. N'aka nke ọzọ, windo nwere ike ịme ihe na-ewe iwe ma na-adọpụ uche na ya, na nkwụsị aka na-eburu ya ihe ize ndụ nke ịgbasa ngwa ngwa nke mmemme ọjọọ nwere ike ịnwe na mgbasa ozi ndị na-ewepu. Ya mere, ọ ga-aba uru ịmụta iji gbanyụọ DVD dọrọ aka na Windows 10.
Gbanyụọ DVD-ikpọ ikike site na "Nhọrọ"
Gbanyụọ iji Ogwe Njikwa Windows 10
Esi gbanyụọ ikike site na iji Nchịkọta Ndị Nchịkọta Group
Nke a bụ ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mfe. Nzọụkwụ iji gbanyụọ ọrụ ahụ:
Mbụ, gaa na "Malite" menu wee họrọ "Ngwa niile".
Anyị na-ahụ n'etiti ha "Ngalaba" na na igbe mmeghe pịa "Ngwaọrụ". Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịbanye na mpaghara "Ngalaba" na ụzọ ọzọ - site na itinye ntinye nchịkọta Win + I.
Ihe "Ngwaọrụ" dị na ebe abụọ nke akara n'elu.
Njirimara nke ngwaọrụ ahụ ga-emeghe, n'etiti ha na n'elu bụ otu mgbaaka na ihe mmịfe. Bugharịa ya na ọnọdụ anyị chọrọ - Nkwarụ (Gbanyụọ).
Ntugharị na ọnọdụ "Gbanyụọ" ga-egbochi windo ndị mepụtara niile nke ngwaọrụ ọpụpụ, ọ bụghị naanị DVD-ụgbọala
Emere, windo a na-emepụtapụ agaghịzi echegbu gị oge ọ bụla ị malitere mgbasa mgbasa ozi gị. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ime ka ọrụ ahụ n'otu ụzọ ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanyụọ njedebe naanị maka ụfọdụ ụdị ngwaọrụ, dịka ọmụmaatụ, DVD, mgbe ị na-ahapụ ọrụ maka ngwa flash ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ, ịnwere ike ịhọrọ paramiri kwesịrị ekwesị na Ogwe njikwa.
Usoro a na - enye gị ohere ịhazi ọrụ ahụ n'ụzọ dabara adaba. Nzọụkwụ site nzọụkwụ:
Iji banye Ogwe njikwa, pịa Mmeri R ma tinye iwu "ichikota". I nwekwara ike ime nke a site na menu "Malite": ime nke a, gaa na "Ngwaọrụ System" ma họrọ "Ogwe njikwa" site na listi.
Chọta taabụ "Autostart". N'ebe a, anyị nwere ike ịhọrọ njikwa nke ọ bụla maka ụdị mgbasa ozi ọ bụla. Iji mee nke a, wepụ akara nlele nke na-egosipụta njikwa nke oke maka ngwaọrụ niile, na na ndepụta nke mgbasa ozi nke mbughari, họrọ otu anyị chọrọ - DVD.
Ọ bụrụ na ị gbanweghị njedebe nke mgbasa ozi ọhụụ ọ bụla, ikike ga-enwe nkwarụ maka ha niile.
Anyị na-edozi nkeji iche iche, na-echefu ichebe. Ya mere, dị ka ọmụmaatụ, ịhọrọ ihe ahụ "Emela ihe ọ bụla," anyị gbanyụọ windo ahụpụta maka ụdị ngwaọrụ a. N'otu oge ahụ, nhọrọ anyị agaghị emetụta oke nke mgbasa ozi ndị ọzọ na-ewepu.
Ọ bụrụ na ụzọ ndị gara aga maka ihe ụfọdụ adabaghị, ịnwere ike iji njikwa nke sistemụ. Nzọụkwụ iji gbanyụọ ọrụ ahụ:
Mepee window windo (iji Win + R keyboard shortcut) ma tinye iwu gpedit.msc.
Họrọ "Templates Templates Templates" submenu "Ngwa Windows" na ngalaba "Mwube Mmalite".
Na menu na-emepe n'akụkụ aka nri, pịa ihe mbụ - "Gbanyụọ Autoplay" ma kaa ihe "Kwadoro".
Ị nwere ike ịhọrọ otu, ọtụtụ ma ọ bụ mgbasa ozi ọ bụla nke ikikere ga-enwe nkwarụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, họrọ ụdị mgbasa ozi nke anyị ga-etinye nchịkọta ahụ akọwapụtara
Gbanyụọ atụmatụ ikike nke DVD-ROM na Windows 10 ọbụna maka onye ọrụ novice. O zuru oke ịhọrọ ụzọ kachasị adaba maka gị ma soro ntuziaka dị mfe. A ga-enwe nkwarụ akpaaka, na sistemụ arụmọrụ gị ga-echebe site na ịbanye na nje virus.